Onye na-agagharị | January 2020
Isi Onye na-agagharị
Na-emelite Maps na Explay Navigator
Maps bụ akụkụ dị mkpa nke onye ọ bụla na-ahụ ụgbọelu ma na-achọkarị ka ewelite mmelite sitere na ebe nrụọrụ weebụ gọọmenti rụrụ. Na isiokwu anyị ga-agwa gị gbasara ibudata ma wụnye map na ndị ọkwọ ụgbọ mmiri. N'okwu a, n'ihi ịdị adị nke ọtụtụ ụdị dị iche iche, ụfọdụ omume dị n'okwu gị nwere ike ịdị iche na nke a kọwara na ntụziaka.
Nsogbu na map NM7 na ọkwọ ụgbọelu
A na-emepụta map maka ndị ọkwọ ụgbọ ala ụfọdụ n'ụdị NM7 site na Navitel ma bụrụ naanị maka nsụgharị ngwa ngwa ọhụrụ. N'isiokwu a, anyị ga-ekwu banyere atụmatụ nile nke nnweta nke kaadị dị iche iche na ngwaọrụ na usoro dị iche iche maka ịwụnye ha mgbe nsogbu bilitere.
Ụzọ iji melite nsụgharị Navitel Navigator
A na-ahụkarị Navitel Software taa na ndị na-eburu ndị nrụpụta dị iche iche. Mgbe ụfọdụ, a ga-etinye ngwa ngwa ugbu a na ngwaọrụ ahụ, mana n'ọtụtụ ọnọdụ, dịka ọmụmaatụ, maka nwelite map ndị ọzọ, ị ka nwere ibudata ma wụnye ngwanrọ ọhụrụ.
Ụzọ iji melite onye na-akwọ ụgbọ mmiri Prology
Ndị na-ahụ maka prology na-arụ ọrụ na ngwanrọ nke Navitel, n'ihi ya, a pụrụ imelite site na mmemme pụrụ iche ma ọ bụ ebe nrụọrụ weebụ gọọmentị. N'isiokwu a, anyị ga-agbalị ịnwale nhọrọ niile maka ịwụnye mmelite ngwanrọ ugbu a na map na ngwaọrụ ndị dị otú ahụ. Imelite onye ọhụụ Prology Na-adabere n'ụdị ngwaọrụ eji, ị nwere ike ịchọta otu nhọrọ abụọ maka ịwụnye fatịlaịza na map na onye ọrụ Prology.
Na-emelite Maps na Garmin Navigator
Maka ndị ọkwọ ụgbọala na ndị njem ọ bụghị ihe nzuzo na ụzọ na obodo na mba na-agbanwe agbanwe. Enweghi mmelite nke oge ntanetị, onye ọkwọ ụgbọ mmiri nwere ike iduga gị na njedebe nwụrụ anwụ, n'ihi nke ị ga - eji oge, ihe onwunwe na akwara. A na-enye ndị na-akwọ ụgbọ elu Garmin iji kwalite na ụzọ abụọ, anyị ga-eleba anya na ha abụọ.
Nwelite ngwa ngwa na Explay site na kọmputa
Onye na-agagharị na-akọwa ụdị dị iche iche taa bụ otu n'ime ngwaọrụ kacha mma nke ụdị a. Maka ịrụ ọrụ kwesịrị ekwesị, ọ nwere ike ịdị mkpa iji aka melite ngwanrọ ahụ, nbudata nke dị na ebe nrụọrụ weebụ. N'isiokwu a, anyị ga-akọwa nuances niile nke ịwụnye ihe ọhụrụ firmware.
Na-emelite Map NAVITEL na Prestigio Navigator
Atụmatụ Prestigio na-etinyebeghị na ya anaghị adị ọhụrụ. Tụkwasị na nke ahụ, NAVITEL na-agbapụta ihe mmelite ya mgbe ụfọdụ, na-agbanwe data dị ugbu a ma na-agbakwụnye ozi ọhụrụ gbasara ihe. Na nke a, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ onye ọ bụla nwe ụdị ngwaọrụ a na-eche eziokwu ahụ na ọ dị mkpa iji wụnye usoro mmemme ọhụrụ ahụ.
Nrụgharị ụgbọala na Njikwa Voice
Taa, ọ siri ike ịchọrọ ụgbọ ala na-agbaghị ụgbọ ala n'enweghị onye ọkwọ ụgbọ mmiri, na-ahapụ gị ka ị zere ọnọdụ ndị na-adịghị mma n'okporo ụzọ. N'ọnọdụ ụfọdụ, ngwaọrụ ndị a na-ejikwa njikwa olu, nke na-eme ka ọrụ ahụ dị mfe n'ụzọ dị mfe. Banyere ndị nnyefe dị otú ahụ, a ga-atụle anyị n'isiokwu na-esonụ.
https://termotools.com ig.termotools.com © Onye na-agagharị 2020